Burkina Faso, ilay hafakely sy tsy fantatra any Afrika | Vaovao momba ny dia
Burkina Faso, ilay exotic ary tsy fantatra any Afrika
Maria | | Africa, Borkina Faso
Ny kaontinanta mainty dia tsy isalasalana fa toerana misy tantara sy angano mahafinaritra. Ho hitanao eto Burkina Faso, iray amin'ireo firenena manetry tena indrindra atsy Afrika nefa koa iray amin'ireo olona tia mandray olona sy mahasarika olona. Ny ala mikitroka dia mifandimby amin'ireo faritra karankaina sy toerana masina amin'ity firenena onenan'ireo foko 67 ity. Ity no antony tokony hahatongavan'i Burkina Faso ho mpitsangatsika manaraka.
Ny fandehanana any Burkina Faso dia ny fanaovana azy eto afovoan'i Afrika. Nandritra ny fotoana elaela, ity firenena ity dia niaina tamin'ny fiverenan'ny fizahan-tany ary nanomboka nihanalaza tamin'ny maha-toerana hafahafa sy fialamboly azy.
1 Tahaka ny ahoana i Burkina Faso?
2 Ouagadougou, renivohitra
3 Toerana hafa mahaliana any Burkina Faso
3.1 Valan-javaboary Kaboré Tambi
3.2 Bobo Dioulasso
3.5 Sisa tavela amin'i Loropéni
4 Ahoana no ahatongavana any Burkina Faso?
Tahaka ny ahoana i Burkina Faso?
Izy io dia faritany tranainy iray izay niainan'ny mponina tamin'ny fomba nentim-paharazana tamin'ny fihazana sy fanangonana. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny empira Songal, fanjakana iray izay mibodo ny ankamaroan'ny ilany andrefan'i Afrika. Taona maro taty aoriana, firenena roa eropeana toa an'i Great Britain sy France no niady hevitra tamin'ny fibodoana ny firenena, i France no nifehy azy hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX. Amin'izany fomba izany, ny teny frantsay no fiteny ofisialin'ny firenena iray mizara telo ambin'ny folo faritra misy vondrom-poko 67 samy hafa.
Ny tsirairay amin'ireto vondrona ireto dia samy manana ny mampiavaka azy ary samy hafa izy ireo noho ny fomba amam-panao sy ny kolontsainy. Ohatra, ny Mossi (vondrona ara-poko manjakazaka) dia manana fomban'ady lava, raha ny Guruntsi kosa dia miavaka amin'ny tranony adobe voaravaka tsara tarehy voaravaka endrika geometrika sy fanampiana ara-pivavahana.
Noho izany, Burkina Faso dia mizara ny faritaniny amin'ireo foko maro an'isa. Noho izany dia tsara ny mitsidika ny vazan-tany rehetra hahafantaran'ny olona ny fomba fiainany samihafa. Na izany aza, raha manana zavatra itoviana ireo foko rehetra ireo dia fandraisana vahiny, fahatsapana miverimberina rehefa tonga any amin'ny tanàna iray.
Niorina tamin'ny taonjato faha-1400 izy ary nahazoana fifandraisana nanomboka tamin'ny taona XNUMX. Izy io angamba no iray amin'ireo renivohitra afrikanina tsy dia fantatra loatra, saingy tsy misy izany tsangambato sy toerana mahaliana ho an'ny mpizahatany izany.
Raha vao eto dia mendrika ny mitsidika ny Katedraly ny Immaculate Conception (iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny maritrano kolonialy ao amin'ny firenena izay natsangana tamin'ny taona 1930 nandritra ny fanjanahana frantsay), ny Museum Manega (noforonin'ny mpanoratra Fréderic Pacéré Titinga hitehirizana sy manaparitaka ny kolontsaina Burkinabe), Kianja Naba Koom, ny Tranombakoka Ethnographic, ny Ouaga-Loudun Garden, ny Bang-Wéoogo Urban Park, ny National Music Museum ary ny Great Central Market (toerana fihaonan'ireo mpivarotra sy mpanjifa mba hanao fifanakalozana ara-barotra, izay nankalazaina nandritra ny taonjato maro.)
Toerana hafa mahaliana any Burkina Faso
Valan-javaboary Kaboré Tambi
Ny valan-javaboahary Kaboré Tambi, miorina amin'ny sisintany miaraka amin'i Ghana, dia manana zava-maniry betsaka, miaraka amin'ny karazan-javamaniry 200 mahery, ary biby manan-danja iray, afaka mahita elefanta, antilopa, amboadia, hyenas, lambo dia ary voay.
Bobo-Dioulasso no tanàna faharoa lehibe indrindra ao Burkina Faso ary heverina ho renivohitra ara-toekarena. Toerana manintona ihany koa ho an'ny mpandeha izy io noho ny moskea misy ny fomba Sodaney taloha izay natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, ireo tanàna manodidina azy, tranombakoka, zoo, tsena ceramika, ny farihy trondro masina ary ny lapa Konsa. .
Io no tanàna lehibe indrindra fahatelo ao Burkina Faso ary tanàna avaratra izay miasa ho renivohitry ny Faritra Avaratra. Ny tena manintona ny mpizahatany dia ny farihy artifisialy, ny kompleksna Yanea Naba ary ny fasan'i Kaba Kango.
Akaiky an'i Banfora no misy riandranon'i Karfiguela. Toerana mety hahasarika anao eo amin'ny natiora ary handroboka ao anaty dobo, riandrano ary jet anaty rano madio aza. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, amin'ny vanim-potoanan'ny orana eto Afrika, dia mahavariana kokoa aza ireo riandrano.
Sisa tavela amin'i Loropéni
I Loropéni dia tanàna iray any atsimon'i Burkina Faso, izay ahitana ny sisa tavela amin'i Loropéni, izay raisina ho toy ny World Heritage Site. Ity toerana arkeolojika ity dia mirefy 11.130 1.000 metatra toradroa ary manana trano mimanda tsara indrindra ho an'ny vondron'olona folo izay naorina XNUMX XNUMX taona lasa izay. Ny rava Loropéni dia vita amin'ny rindrina vato mena izay mety mihoatra ny enina metatra.
Ahoana no ahatongavana any Burkina Faso?
Mampifandray an'i Paris amin'i Ouagadougou isan'andro i Air France mandritra ny € 700 manodidina. Raha vao tonga any, ny safidy mety indrindra dia ny manakarama masoivoho manam-pahaizana manokana izay mandrindra ny diany manokana manodidina an'i Burkina Faso sy ireo firenena manodidina.
Na ny fifandraisan'ny mpandeha voalohany amin'i Afrika lavitra sy tsy fantatra indrindra na ny filana miaina traikefa nahafinaritra dia i Burkina Faso no firenena lavorary. Azo inoana fa hahagaga anao ny traikefa amin'ity faritany sariaka ity ary handresy anao amin'ny farany. Antony izay manazava fa rehefa tapitra ny dia, ny faniriana hiverina na hahafantatra ny iray amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy dia tsy hay tohaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Burkina Faso, ilay exotic ary tsy fantatra any Afrika
Fitsangatsanganana efatra amin'ny ala any Espana amin'ity fararano ity
Egypt: renirano Neily, toetrandro ary mponina